Construction Decoration & Other Services - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 405 view counts
Brand : S.S.S Construction
Model : Services
လုပျငနျးအမညျ : SSS (Special, Speed and Smart ) Construction Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-373089 , 09-5025771 , 09-73006189, 09-5026543
အခန်းပေး အခန်းယူစနစ်ဖြင့် လုံးချင်း / အထပ်မြင့် / နိမ့်အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း ။
ပုဒ်ပြတ် (PAE) စနစ်ဖြင့် လုံးချင်း / အထပ်မြင့် / နိမ့်အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း ။
ပုဒ်ပြတ် (PAE) စနစ်ဖြင့် နေအိမ် / ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း နှင့် အဆောက်အဦများအား Decoration / Renovation ပြင်ဆင်ခြင်း ။
စည်ပင်သာယာခွင့်ပြုချက်ရသည့်အထိ သတ်မှတ်စည်းကမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ။
မြေပုံ ၊ မြေရာဇ၀င် ၊ စာချုပ်စာတန်း ကိစ္စများကို လျှင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မှန် ၊ အလူမီနီယံ နှင့် ကွန်ပိုးစစ် ပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးခြင်း ။
စတီး(လ်) ၊ အလှဆင်လုပ်ငန်းအားလုံး ပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးခြင်း ။
ပါကေး ၊ လျှာထိုး ၊ ကြွေပြားနှင့် ကြမ်းခင်း အမျိုးမျိုး ခင်းပေးခြင်း ။
သံပန်း ၊ သံတံခါးနှင့် လိပ်တံခါး မျိုးစုံပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးခြင်း ။
ရေပိုက်လိုင်း နှင့် မီးလိုင်းများ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ပေးခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ စိတ်တိုင်းကျ ကျွန်တော်များ ထူးခြားမြန်ဆန်သေသပ်သပ်ရပ်သောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ဆောက်ရွက်ပေးနေပါသည် ။
S.S.S Construction Co., Ltd. is established in 2000. It's located at No.11, Bahan 1st Street , Myoma Quarter, Bahan Township, Yangon in Myanmar. We are focusing on construction, fitting-outs, maintenance, renovation, design and build of building projects. Based on its solid experience, multi-talented professionals, effective management system and highly efficient building technology, in present, the Company has become one of contractor foralarge number of contracts for various private developers and government institutions in throughout the Myanmar region.
If you interested S.S.S Construction, please send us an email at admin@sss-construction.com. If you require more information, do not hesitate to contact us.
For Construction Decoration & Other Services
May I get the quotation for "Construction Decoration & Other Services " ?